Maxaad ka taqaanaa gudoomiyaha JIJA? (Khadar Mohamud Hareed) | Jubbaland Media Online
Maxaad ka taqaanaa gudoomiyaha JIJA? (Khadar Mohamud Hareed)
Posted on July 19, 2016 in Arrimaha Bulshada, Wararka // 0 Comments
Aad ayaan ugu farax sanahay in aan qalinka u qaato amaba wax ka qoro taariikhda gudoomiyaha ururka saxafiyiinta madaxa banaan ee Jubaland weriye Khadar Mohamud Hared, oo runtii ah weriye soomaliyeed, si wanaagsanna uga dhex muuqda saxaafadda dalka Soomaaliya siiba Jubaland.
13-ki bishan july 2016 ayaa Hared mar labaad loo doorto gudoomiyaha ururka saxafiyiinta madaxa banaan ee Jubaland, asaga oo helay kalsoonida dhammaan saxafiyiinta soomaaliyeed ee ka howlgala Jubaland. Sawirka kore waxaa ka muuqda weriye Hared oo taagan iyo agaasimaha Jubaland TV mudane Abdi Naasir Saxan-saxo oo garab fadhiya. Taas waxaad ku xaqiiqsan kartaa in weriye Hared sidoo kale haysto kalsoonida wariyayaasha aan madaxa banaaneyn ee u shaqeeya dowladda. Daawo habki doorashada u dhacday 13-ki July 2016
Bishii December sanadkii 2014 ayaa weriye Hared markii ugu horeysay xilkan loo doortay. In maanta mar labaad dib loogu doortayna waxay muujineysaa aqoontiisa saxafinimo iyo weliba kartidiisa shaqo.
Waa kuma Khadar Mohamud Hared?
Khadar Mohamud Hared wuxuu ku dhashay Jubaland, gaar ahaan gobolka Jubada Hoose sanadkii 1991. Waxbarashadiisa dugsiga hoose iyo dhexe wuxuu ku qaatay xerada qaxootiga Dhadhaab (IFO), sanadihii 2002-2008, halka dugsigii sarena uu ku qaatay iskuulka Maxamed Jaamac ee Kismaayo, sanadihii 2008- 2011.
Hadda waa arday wax ka barta jaamacadda Kenya Methodist University ee magaalada Nairobi waxuuna ku guda jiraa diyaarinta digreegiisi koobaad, kulliyadda mass communication.
Waxuu shaqada saxafadda ku biiray bishii December 2008, asagoon weli dhameynin dugsigiisi sare, waxuuna shaqadii ugu horeysay ka bilaabay idaacadda Horseed media ee magaalada Boosaaso, oo uu wararka uga tabin jiray magaalada Kismaayo. Dhanka kale waxuu sii watay waxbarashdiisi dugsiga sare oo uu si wanaagsan u dhameystay.
Sanadihii 2009-2010 waxuu ka shaqeeyay telefeshenka East Africa Network (ETN-TV) oo uu uga soo warami jiray magaalada Kismayo ee Jubbaland.
2010-2011 waxuu ahaa weriyaha Radio IRIN uga soo warama magaalada Kismayo iyo guud ahaan Jubbaland.
Weriye Hared ayaa horaanta sanadkii 2011-ka u wareegay magaalada Muqdisho, halkaasoo barnaamij soo sare iyo weriyaba uu ka noqday idaacadda codka nabadda xarunteeda Muqdisho, ilaa sanadkii 2012.
Laga bilaabo bishii August 2011- 2014 waxuu la shaqeeyay Radio Ergo oo uu wararka u diri jiray.
Sanadihii 2011- 2012 waxuu ka shaqeeyay Goobjoog Radio, xaruntiisa Muqdisho, waxuuna mas’uul uga ahaa qeybta wararka (News editor)
2012- 2015 waxuu ahaa weriyaha Radio Bar-kulan u qaabilsan gobolada Jubaland.
Laga soo billaabo bishii October 2015- March 2016 waxuu ahaa agaasimaha Soyaal Radio, xaruntiisa magaalada Kismaayo
Xilligan la joogo weriye Hared waa wakiilka telefeshenka caalamiga ah ee Somalichannel u qaabilsan Jubaland, waxuuna xilkan soo hayay laga soo billaabo bishi April 2009. Sidoo kale laanta afka Soomaaliga ee VOA oo uu mar dhow ku biiray.
Khadar Mohamud Hareed waa wariye Multi-media ah (Wariye wax duuba, wax jarjara, codeeya), wuxuu sidoo kale diyaariyaa warbixinada muuqaalka ah, sida barnaamijka Qubanaha VOA ee Jubbaland. Sidoo kale waa wariye falanqeeya arrimaha geeska Africa, sida dalalka Kenya, Somalia, Ethiopia Uganda iyo Tanzania.
Dhanka kale waa weriye soo jiidasho leh marka uu warbixinnada akhrinayo, sida cod-idaacadeedkiisa dahabiga ah ee lagu laray hanaan akhriska wanaagsan, kalsoonida nafsiga ah iyo deganaanta, afsoomaaliga sugan ee soohan ee aan sarma-seegtada lahayn intaba waa sifooyin aniga aragtideyda uu kulansaday weriye Hared. Intaa waxaa u dheer dhex-dhexaadnimada oo aan is leeyahay waxaa saldhig u ah xirfaddiisa saxafinnimo. ( daawo warbixintan weriye Hared ka dibna qiimee!)
Weriye Hared waxaa lagu xasuusnaa tabintiisi talantaaliga ahayd, telefeshenka caalamiga ah ee Soomaalichannel, xilligii uu socday shirweynihii jaamacadda Kismaayo ee lagu aas-aasay Jubaland. Hared waxuu ahaa saxafi bulshada soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba u bidhaamiyay howlihii xilligaas ka socday Kismaayo, xilli weliba dagaal saxaafadeed iyo mid ciidan ku socday Jubaland, taasoo la dhihi karo weriye Hared waxuu qeyb Libaax ka qaatay halgankii dhidibada loogu aasay dowlad goboleedka soomaliyeed ee Jubaland.
Wakiilka telefeshenka Somalichannel u qaabilsan Jubaland, ahna wakiilka laanta afka soomaaliga ee VOA u qaabilsan arimaha Jubaland, islamarkaana ah gudoomiyaha saxafiyiinta saxafadda madaxa banaan ee Jubaland, mudane Khadar Mohamud Hared waxaan leenahay hambalyo xilkan markii labaad laguu igmaday.